Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Kuzanywa kwaye kuvavanywa: Inkampu yeBoot eSychelles Emangalisayo
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
Iqela labantu abathanda imithambo evela eRashiya lifumene i-tropical adventure egqibeleleyo eSeychelles boot camp escapade.
I-Slim Fit Club boot camp yinkampani "ephezulu" kunye neendawo ezimangalisayo ezikhethiweyo ukuba zicele umngeni kubathathi-nxaxheba.
Injongo yenkampu yeebhutsi kukutyhala umda kabani.
Ngexesha labo leentsuku ezilishumi kwesi siqithi, iindwendwe ezivela eRussia zithathe inxaxheba kwimisebenzi emangazayo enje ngokufaka i-zip kunye nokukhwela amatye e-Constance Ephelia Resort.
Inkampu yeBlue Boot-Ngokwenyani yinto!
Umnyhadala waminyaka le, ikampu ye-Slim Fit Club yokuzibandakanya yinto ephezulu kunye neendawo ezimangalisayo ezikhethelwe umngeni kubathathi-nxaxheba.
Indawo ekhethiweyo kufuneka ikwazi ukubonelela ngamathuba aneleyo kwimidlalo nakwimidlalo ye-adventure, ukufunyanwa kwenkcubeko kunye nembali, kunye nomhlaba ofanelekileyo wokucela umngeni kubathathi-nxaxheba. I-Seychelles yakhethwa kungekuphela ngobuhle bayo bendalo kodwa okona kubaluleke kakhulu, kukukhetha kwayo.
Ngenxa yonyango lokunethezeka ukusuka nokufika, umphathi weRussia iAeroflot ubonelele ngezinto zokubala kubathathi-nxaxheba xa bemka kwisikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo kunye nezibonelelo ezongezelelweyo kunye nemithwalo, izipho ezinophawu kunye ne-intanethi encomekayo ebhodini.
Ngelixa uye kwindawo ekuyiwa kuyo, wafuna iinkonzo zamaqabane endawo, kubandakanya i-7º South kunye neCreole Travel Services, ezinikezela ngeenkonzo zazo ezilungileyo kunye nentsebenziswano ukuqinisekisa umsitho ophumeleleyo.
Ukuphonononga imida yomzimba
Injongo yenkampu yeebhutsi kukutyhala umda womntu, esinye seziganeko eziphambili kwikhalenda yamanenekazi eSlim Fit Club yayihamba ngeenyawo ukuya kwiincopho zeMorne Blanc kunye neDans Gallas, imisebenzi emibini ebeka inqanaba labo lokomelela kuvavanyo ngelixa bonwabile Iindlela ezimbini ezintle kwisiqithi esikhulu saseMahé. Ejikelezwe yindalo, uPolina Kitsenko kunye neqela lakhe leSlim Fit balinda iinduli ezinqabileyo kunye nokufuma okuphezulu, ukuyenza ukuba ibe phezulu ngengxaki encinci, bavuzwa ngeendawo zokuphefumla esiphelweni sohambo.
Ngexesha labo leentsuku ezilishumi kwesi siqithi, iindwendwe ezivela eRussia zithathe inxaxheba kwimisebenzi emangazayo enje ngokufaka i-zip kunye nokukhwela amatye e-Constance Ephelia Resort kunxweme olusemantla-ntshona eMahé.
Ngeentsuku abangakhange baziphumele ngaphandle kwehotele, inkqubo ibingasokolisi kangako, abathathi-nxaxheba babegcinwa bexakekile yimisebenzi eliqela yabantu kunye neqela. Oku kubandakanya iiseshoni zoqeqesho kwezemidlalo kathathu ngemini.
Uhlobo loCreole olungashukumi
Yayingenguye wonke umsebenzi owenzelwa i-Slim Fit Club eyenze olona hambo lubalaseleyo lwe-catamaran eSainte Anne Marine Park ebandakanya utyelelo kunye nesiqithi saseMoyenne, eyona paki incinci yelizwe yanikwa abantu Seytshels owayengunondaba kunye noRobinson Crusoe wale mihla, uBrendon Grimshaw, kunye nebhari yesiCreole elunxwemeni.
Ibibanjelwe kwenye yeendawo zokuhlala zeSine Seasons Resort Seychelles (igama elipheleleyo lehotele kunye nendawo ekuyo), amantombazana aphathwa njengeqela lamaCreole phantsi komxholo othi 'Ukukhanya kwenyanga eParadesi' ukujikeleza inkampu ebalaseleyo. IPirates iyafana iiSeychelles, le ndawo inqabileyo yembali yesi siqithi yabhiyozelwa ngodidi lokuxuba ngokubambisana nabavelisi botywala bengingqi iTakamaka Rum phantsi komxholo othi 'In Search of Treasure'.
Imidiya yokuncokola kunye nokunye
Ukudala umxholo omhle nomgangatho ophezulu, uqaqambisa iyantlukwano yendawo esiya kuyo, indalo, izilwanyana nezilwanyana, iilwandle, imisebenzi enikezelwayo nokunye okuninzi, UNks. abathengi abaphezulu kwiRussia yonke kumaqonga eendaba ezentlalo.
Abanye abathathi-nxaxheba bathumele kwaye babelana ngamabali okuphumelela kwabo eSeychelles, bebonisa iziqithi ze-Indian Ocean archipelago njengendawo eluhlaza kunye neyonwabisayo.
Inethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi isungule iQela lezoKhenketho laseSaudi ...
Yayivela phi iCoronavirus?